August | 2012 | Tourism Latest News
HomeContactsFDI LAWGuide LicenseHotel DirectoriesHotel LicenseMinistry ActivitiesRestricted AreaTour Co,.Ltd LicenseTour Transport LicenseTraining Schools
Monthly Archives: August 2012	မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များမှတဆင့် နိုင်ငံ၏ ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်အား နိုင်ငံတကာမှ သိရှိနိုင်စေရေး စေတနာထား ကြိုးစားဆောင်ရွက်
Posted on August 28, 2012 by admin	(နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်လ-၂၇ ရက်) နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ဦးတည်ပြီး ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာချိန်တွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ရည်မှန်းချက်တာဝန် (၄)ရပ်ချမှတ် ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် ၀င်ထွက်မှုစနစ်တကျ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ စနစ်တကျဖြစ်ရေး၊ ဟိုတယ်နှင့် စားသောက် ဆိုင်များ၏ ၀န်ဆောင်မှုအဆင်အတန်းမြင့်မားစေရေး၊ ခရီးစဉ်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရေရှည် တည်တံ့အောင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် နေရာဒေသဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ … Continue reading →
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြော
Posted on August 28, 2012 by admin	(နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်-၂၄ ရက်) ရှမ်းပြည်နယ်၊ အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲအား ယနေ့နံနက် (၀၉း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ညောင်ရွှေမြို့၊ ဟူပင်ခေါင်တိုင်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တက်ရောက်အမှာ စကားပြောကြားသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးစ၀်အောင်မြတ်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင်နှင့် တာဝန်ခံအရာရှိများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဌာနတာဝန်ခံအရာရှိများ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် အသင်း (၁၁)သင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ကြသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ … Continue reading →
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းများ အမှတ်စဉ်(၇/၂၀၁၂)သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်မှာကြား
Posted on August 28, 2012 by admin	(နေပြည်တော်၊သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်၍ ပုဂံဇုန် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင် များအသင်း၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်သော ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက် (၀၉း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ညောင်ဦးခရိုင်၊ ပုဂံမြို့ ဧရာဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တက်ရောက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ၀န်ကြီးဌာန၏ရည်ရွယ်ချက်များအနက် “ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရပ်များ တိုးတက်ထွန်းကားစေပြီး အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးပွားလာစေရန်” ဟူသောအချက်အရ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ … Continue reading →
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်း မန္တလေးတိုင်းဒေသနှင့် ပုဂံညောင်ဦးဒေသ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
Posted on August 28, 2012 by admin	(နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်-၂၂ ရက်) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးဒေသနှင့် ပုဂံ-ညောင်ဦးဒေသ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ယနေ့နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီ အချိန် တွင် ညောင်ဦးမြို့နယ်ရှိ ပုဂံဟိုတယ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တက်ရောက်အမှာ စကားပြောကြား သည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပုဂံ-ညောင်ဦး မြို့နယ်မှ ဌာန … Continue reading →
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
Posted on August 22, 2012 by admin	(နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်-၂၀ ရက်) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနသည် ၀န်ဆောင်မှုကဏ္ဍဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံ သားတို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချစေရေးတို့အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရေး တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ တစ်ဘက်မှလည်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် မူဝါဒ (၄) ရပ်အဖြစ် ခရီးသည်များ ၀င်/ထွက်မှု စနစ်တကျ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရေး၊ ခရီးသည်များသွားလာရာတွင်လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် ခရီးသွား ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ စနစ်တကျဖြစ်စေရေး၊ ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များ ၀န်ဆောင်မှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရေးနှင့် ခရီးစဉ်ဒေသများ စနစ်တကျဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကိုချမှတ်၍ … Continue reading →
Ministry of Hotels and Tourism meets with investors from local and international who proposed tender for hotels
Posted on August 14, 2012 by admin	Nay Pyi Taw, 14 Aung 2012 Ministry of Hotels and Tourism summonaproposal tender for Kyeik-Hto Hotel, Won Zin Hotel, Kalaw Hotel, Pin Ta Ya Hotel, Kaw Taung Hotel, LatKhotKone Hotels and Imperial Jade Hotel that expired contract. Nine … Continue reading →
Deputy Minister H.E U Htay Aung, Ministry of Hotels and Tourism, was met by Thailand Tourism authority, Vice Administrator International marketing (Asia and Pacific), Mr. SANSERN NGAORUNGSI and fellows
Posted on August 10, 2012 by admin	Nay Pyi Taw, 10 Aug 2012 Deputy Minister H.E U Htay Aung, Ministry of Hotels and Tourism, was met by Thailand Tourism authority, Vice Administrator International marketing (Asia and Pacific), Mr. SANSERN NGAORUNGSI and fellows, today morning 10:00 AM at … Continue reading →
Yangon Region Hotels and Tourism Development Discussed
Posted on August 9, 2012 by admin	Yangon, 8 Aug 2012 A workshop on Yangon Region Hotels and Tourism Development, organized by the Ministry of Hotels and Tourism, was held at Innya Lake Hotel, here, this morning. At the workshop, Union Minister for Hotels and Tourism … Continue reading →
Open Korea Speaking Course with cooperation of Ministry of Hotels and Tourism and ASEAN-Korea center
Posted on August 7, 2012 by admin	Nay Pyi Taw,6August 2012 Korea Speaking Course opening ceremony was held in Chatrium hotels, Yangon today morning 9:30AM. U Hlaing Myint, expert from Directorate Department, Ministry of Hotels and Tourism and H.E Mr. Hae Moon CHUNG General … Continue reading →
Hotel service training course (6/2012) completion ceremony
Posted on August 6, 2012 by admin	Nay Pyi Taw,4August 2012 Hotel service training course (6/2012) completion ceremony by leading of Myanmar Hotelier Association (Taunggyi) with supervise of Ministry of Hotels and Tourism was held in Hill Top Hotel, Kalaw today morning 9:30AM … Continue reading →
Recent Posts	ဒေါ်လာသန်း(၅၀၀)ကုန်ကျမည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအစီအစဉ် မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ဖော် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဦးဌေးအောင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
Union Minister for Hotels and Tourism attends and makesaspeech at closing ceremony of Hotel Servicing Course (11/2013) at Nay Pyi Taw hotel zone
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် ဂျာမဏီနိုင်ငံအခြေစိုက် Hanns Seidel Foundation နှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန တို့အကြား ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ